Sjöstedt:Waxaana la jooga xilligii dib u eegis loogu sameyn lahaan faa'idooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hogaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt oo maanta furey kulanka xisbiga ee ka dhacaya Münchenbryggeriet magaalada Stockholm. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT.
Sjöstedt:Waxaana la jooga xilligii dib u eegis loogu sameyn lahaan faa'idooyinka
La daabacay fredag 10 januari 2014 kl 14.28
Xisbiga Vänsterpartiet ayey maanta uga bilaabaneysaa kulan weynahooda sannad laha ah magaalada Stockholm, kulankan oo sannadkan ku soo aadey xilli ay Iswiidhen ka bilaaban doonto mar dhow olalayaal loo geli doono labo doorasho oo ka dhici doona dalkan.
Midi tahay doorashada barlamaanka midowga Yurub iyo doorashada barlamaanka dalka iyo deeganada. Arimaha doorashooyinkana waa wax raad weyn ku yeelan doona kulan weynaha xisbiga sida ay tiri Jonna Sima oo ah tafatiraha wargeyska Dagens Arena.
- Waxaan maleynayaa in ariamaha doorashooyinka raad weyn ku yeelan doonaan kulankan. Haddi aan ku bilowno doorashooyinka barlamanaka, degmooyinka iyo gobolada oo dhaci doonta dayrta taas oo ah doorahsada ugu weyn, arimaha ugu muhimsan oo xisbigan ahmiyad siin doona waxey noqonayaan shaqo la’aanta iyo nolal wanaaga. Waxaa jira dalab ay jeedianayaan hogaanka xisbiga oo ah in ahmiyad la siiyo arintan oo dhicna layska dhigo inta uu socdo kulan weynaha mooshinada arimaha kale ku sabsan. Dhanka kale waxaa soo socda bisha may doorashada barlamaanka EU, xisbigana wxauu doonaya in kor u qaado natiijada ay ka helan doorashadan 2009. Waayo aad bay doorashadas natiijada xisbiga hoos ugu dhaceen oo dhacey 12 gaarteyna 5,6 procent taas oo ka micno ah in ay dhumiyeen kalo bar codadkii ay heleen doorashadii ka sii horeysey.
Arimaha nolal wanaag iyo sidii looga hortagi lahaa in faa’idooyin laga dhurto xarumaha danta guud ayaa ah waxyaabaha aadka muhiimka ugu ah Vänsterpartiet sida uu yeri Jonas Sjösted hogaamiyaha xisbiga.
- Waxaan aragnaa halaaga ay u keentey ka ganacsiga nolal wanaaga, waxaan aragna sida ay iskuulada u kacayaan oo caruurteedana u helayaan fursado waxbarasho oo aan isku mid aheyn, waxaan arganaa sida daryeelka waayeel loo qorsheeyo si faa’idooyin xad dhaaf ah looga helo oo aan loo qorsheynin si qadirinta waayeelka ku dhisan. Ma qabno in daneynta qallocan ee faa’ido doonka ku dhisan ay ku haboon tahay dhamaan qaybaha kalo gedisan ee nolasheena. Waxaan aragnaa sida ay u saameysey farmashiyaasha, dayac tirka dhabayaasha tareenada. Waxaana la jooga xilligii dib u eegis loogu sameyn lahaan arintan. Annagana waxaan nahey quwadda xisbiga ee keliya ee dooneysa in dib u eegis arintaan lagu sameeyo ayuu yeri Sjösted.
Cod bixiyaasha ayaa intooda badan ka soo horjeeda faa’idooyinka shirkadaha ka gurtaan xaruumaha danta guud sida ay muujisey baaritaano la sameyey bartamahii sannadkii hore. Xisbiga Vänsterpartiet kama soo horjeedo in si shirkado qaas la haadaan xarumo danta guud balse waxa keliya ee ay ka soo horjeedaan ayaa ah in hadafka keliya ee xarumas loo leehey ahaato sidii faa’ido looga heli lahaa sida uu yeri Sjöstedt.
- Hadafka waxa weeye in shirkadaha saami leyda laga saaro xaruumaha danta guud , markaas waxaa laga nabad galayaa waxii aan aragney sannadkii ugu danbeyey oo ah in ay kacaan ama inta la iibsado hadana la sii gado, markas waxaan heleyna xasilooni ay degmooyinka wax ku qorsheyn karaan iyo iskuulo isku dhigma oo oo ardeyda oo dhan u fiican ayuu yeri